Shona – CCOG – Continuing Church of God Africa
Home › Archive for Shona
Chakavanzika Chokuronga kwaMwari
Posted on April 5, 2022 by ccogadmin
2 Zviri mukati 1. Hurongwa hwaMwari Chakavanzika kune Vazhinji 2. Nei Pakasikwa? Sei Vanhu? Neiko Satani? Chii chinonzi Chokwadi? Ndezvipi Zvakavanzika zveZororo neChivi? 3. Zvitendero Zvenyika Zvinodzidzisei? 4. Nei Mwari Achibvumira Kutambura? 5. Nei Mwari Akakusika? 6. Pane Hurongwa Hwenguva…
Posted in Shona
Vhangeri reHumambo hwaMwari
Nei vanhu vasingakwanise kugadzirisa matambudziko ayo? Unoziva here kuti zvinhu zvekutanga uye zvekupedzisira izvo Bhaibheri rinoratidza kuti Jesu akapararidza zvine chekuita nezveevhangeri yeHumambo hwaMwari? Unoziva here kuti Humambo hwaMwari ndohwakasimudzira vaapositori nevaya vakatanga hwakavatevera? Humambo hwaMwari ndihwo hunhu hwaJesu here?…